Revolisionera Rideshare and Transportation Mpandrindra Network
Sign up ankehitriny
Ny WOW antony
Ny Network Pings Anao.
Préférences fanaraha-maso sy ny SMS Email miasa toy ny lalao Info amin'ny sarintany, rehefa mitranga ny lalao, sy ny maro hafa. Azonao atao ihany koa ny solosainao ny lisitra fotsiny ka hanamarina izany, raha tianao. Ny lisitra hiova foana. Raha hoy ianao: Tsy misy Email dia ny No Email.
Lazao Ahy fanampiny
Driver Rates sy Trips.
Mpamily teo thier ny taha, ary hamaritra ny fitsangatsanganana, hatraiza izy ireo hivoaka ny lalana, ny andro ilay dia, ny Drop sy ny Mileage Rate . Tsy mihazakazaka ny fandaharana!
rehetra Driver no Mpanjaka. Aoka ny maimaim-poana Market Ring!
Company Commuting sy Fitaterana
Public na Private Systems
manokana handamina orinasa maneran-fitateram sy commutes in minitra amin'ny fampidiram-pejy banky angona. Group na Corporate rafitra afaka mamaritra ny fifandraisana, mitovy dia afaka hiaraka amin'ny vahoaka, vondrona voafetra, tsy voatery ho ny mpampiasa, na voafetra ny mailaka sehatra
Marina World Wide Capability
Ny rafitra amin'ny voafetra Boky fahaizany izay miasa ao ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny niaviany langugage mba hahabetsaka ny fahombiazan'ny ny Fitaterana sy hampihenana ny entona entona.
ny tanjona dia
Fenoy Up ny toerana babangoana
Ampiasao ny kitapom-batsy noho ny zava-drehetra hafa tsy mividy entona!
Ampiasao ny Fast Lane
Hanome fitaterana fandrindrana amin'ny vonjy taitra toe-piainana na amin'ny ankapobeny ary ao anatin'ny vondrona ho nangataka na voafaritry ny mpampiasa, ny vondrona, na ny fiaraha-monina.
mihazakazaka amin'ny zavatra
Mihazakazaka Tena Fast
mihazakazaka World Wide
100% no-bola-miverina antoka
Raha tsy miezaka ny hamonjy ny planeta dia ny eo.
World Wide Usage afaka avo roa heny ny fahaiza ny fitaterana manapaka entona entona, isika dia nifikitra ny rafitra ananantsika amin'izao fotoana izao, intsony ny fampiasana azy io amin'ny 20% fahaiza ary manomboka mameno ny seza foana.
Miaraha amin'ny Facebook & Toy!